eNasha.com - दार्जिलिङ, मुम्बई, दिल्ली र काठमाडौँ: एक शिक&
दार्जिलिङ, मुम्बई, दिल्ली र काठमाडौँ: एक शिक्षा
यी चार शहर तीमध्ये दुइ राजधानी शहर र दुइ भिन्न संस्कृति र संस्कारको शहर । यी चार शहरको गम्भीर अध्ययन गरेकी गायिका अभया सुब्बाको जीवनमा यिनले गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । दार्जिलिङले उनलाई हुर्कायो-बढायो, बम्बईले सङ्गीतको साथी बनायो, दिल्लीले सङ्गीत सिकायो र काठमाडौँमा उनी लोकप्रिय बनिन् ।
पहाडकी रानी, यसै भन्छन् दार्जिलिङलाई । यहीँ जन्मिएकी थिइन् अभया । यो पहाडकी रानीले उनलाई एउटा मायालु बुवा उपहार दियो । तिनै बुवा नयनप्रकाश सुब्बाको प्रेरणाप्रद शिक्षणले उनलाई भविष्यको अभया (भयरहित) नारी बनाइरहेको थियो । तर उनी यसमा अनजान थिइन् । उनका तीन दिदीबहिनीलाई बुवा नयनप्रकाशले हरेक विधामा पोख्त बनाउने प्रयास गर्नुभयो । कतिसम्म भने जेठी उदयालाई बुवाले भ्वाइलिनमा पोख्त हुन कर गर्नुभयो । माहिली अद्वितीलाई चेलोमा रमाउन सिकाउनु भयो र कान्छी अभयालाई पियानोसँग खेल्न प्रेरित गर्नुभयो । हुन पनि अम्बर गुरुङभन्दा केही कान्छा नयनले आफूले सङ्गीतमा धन र मन दिनु भए पनि आफू प्रहरीमा जागीर खानु परेकाले तन दिन सक्नु भएको थिएन । शायद त्यसैको रन्को हुनर्ुपर्छ, उहाँले आफ्ना छोरीहरुलाई सङ्गीतलाई माया गर्न सिकाउनु भयो, सङ्गीतमा रम्न सिकाउनु भयो र त्यसैमा जम्न सिकाउनु भयो ।
"दार्जिलिङको माटोमा नै सङ्गीत छ", पूर्ण अंग्रेजी लवजमा उनी नेपाली बोलिरहेकी थिइन्, थपिन्- "त्यसैले मैले चाँडै त्यो सिक्न सकेँ ।" तर बुवा नयन पनि कम चलाख हुनुहुन्थेन, छोरीहरु सङ्गीतमा बढी रम्ने र शैक्षिक योग्यतालाई चटक्क बिर्सने पो हुन् कि भन्ने आशङ्काले तीन दिदीबहिनीलाई एउटा प्रस्ताव राख्नु हुन्थ्यो- "जो प्रथम हुन्छ, उसले चाहेजस्तो उपहार पाउने छ र तीन महिनासम्म ऊ सङ्गीतमै हराउन सक्ने छ ।" अनि शुरु हुन्थ्यो, तीन दिदीबहिनीको पढ्ने प्रतिस्पर्धा । कक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएको तीन महिनासम्म तीनै जनाले मज्जाले गायन, नृत्य र वादन सिक्थे र स्कूल लाग्ने अन्तिम साता गाउँभरिका व्यक्तिहरुलाई बुवा नयनले भेला गराएर आफ्ना छोरीहरुको कला देखाउनु हुन्थ्यो । दार्जिलिङले यस्तो सिकायो ।
एउटा गाउँजस्तो शहरले सङ्गीतलाई माया गर्न सिकाएको थियो उनलाई । उनी पढाईलाई जारी राख्न मुम्बईजाँदा यो 'फास्टेस्ट' शहरले उनलाई एउटा साथीसँग परिचित गरायो । त्यो साथी थियो- अहिलेको जल्दोबल्दो गायक, कैलाश खेर । कैलाश र उनका साथीहरुको साङ्गीतिक समूह 'कैलाशा' उनका लागि राम्रो साङ्गीतिक 'क्लास' बन्न पुग्यो । उनले यिनीहरुबाट पनि सङ्गीतको महत्वपूर्ण शिक्षा पाइन्, त्यो शिक्षा थियो- प्रख्यात होऊ तर धर्ती नछोड । प्रख्यातिसँगै धेरैले आफ्नो धरातलीय यथार्थ छोड्छन् र बिर्सन्छन् आफ्नो विगत ।
तर, उनी मुम्बैमा अड्न सकिनन्, "ज्यादै फास्ट लाग्यो मलाई", अभयाले त्रिपुरेश्वरको एउटा महङ्गो रेष्टुराँमा मीठो मःमः चपाउँदै भनिन्- "म जस्तो महत्वाकांक्षाहीन व्यक्तिका लागि मुम्बै उचित ठाउँ रहेनछ ।" उनले फेरि थपिन्- "तपाइँ महत्वाकांक्षी हुनुभयो भने मुर्म्बईमा चाहिँ इनोसेन्स त्याग्नुपर्छ, त्यो मलाई मञ्जुर थिएन ।"
यसबीच उनले आफ्नो पढाइलाई जारी राख्न सकिनन् । उनी मूलतः त्यहाँ पढ्न गएकी थिइन्, पढाइ अगाडि बढाउन नसकेपछि उनी भारतीय राजधानी हान्निइन् ।
उनलाई मुर्म्बई र दिल्लीको फरक नसोध्नुस्, उनलाई हात्ती र हात्ती छाप चप्पलजस्तै लाग्छ । अर्थात् विज्ञापनले भनेजस्तै उस्तै-उस्तै हो नानु ! तर यहाँ उनले सङ्गीतलाई अझ फराकिलो गरी बुझ्ने अवसर पाइन् । उनले त्यहाँ एउटा ब्याण्डसँग गाउने अवसर पाइन्, यस ब्याण्डले उनको अंग्रेजी गायनको शब्दकोषलाई निकै वृहद् बनायो । तर पनि दिल्लीमा गाएर हिट हुनुभन्दा अघि उनलाई मानसिक धक्का पुग्यो । उनले भनिन्- "तर मलाई नसोध्नुस्, त्यो धक्का के थियो, किन भयो र म किन दिल्लीबाट वाक्क भएर काठमाडौँ छिरेँ !"
साङ्गीतिक समूहको कसिलो बन्धन, त्यसलाई चलाउन हुनुपर्ने खुबी र समग्रमा गतिलो सङ्गीत बनाउन चाहिने ल्याकत आदिबारे बुझिसकेपछि उनलाई लाग्यो, मैले प्रायः धेरै सिकिसकेँ । त्यसपछि उनी काठमाडौँ आइपुगिन् ।
उनी काठमाडौँसँग रम्न थालेपछि लाग्यो, उनले खोजेको शहर यही हो । न त यो दार्जिलिङजस्तो सुस्त छ, न त दिल्ली र मुम्बईजस्तो हतार र हतासमा छ । यसको आफ्नै लय छ, गतिको । यसलाई न धेरै हतार न धेरै फूर्सद । शुरुताका उनले सन् १९९७ मा हिट्स एफएम रेडियोकर्मीका रुपमा केही वर्षबिताइन् । साथमा उनी साङ्गीतिक समूह बनाएर रक्स बारमा गाउँने र बजाउने काम पनि गर्थिन् । यो काम उनलाई ज्यादै रुच्यो ।
तर के विदेशी गीत गाएर केही सीमित व्यक्तिहरुको वाहवाही नै सबैथोक पूर्ण भएको मान्न सकिन्छ र ? उनको मनमा यही प्रश्न उब्जिरहेकै बेला नेपाली रक गायनका एउटा उँचो नाम रबिन तामाङ टुप्लुक्क उनीकहाँ आइपुगे । उनले आफ्नो समस्या बताइन्, जो रविन एक समय यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए- अभयाको समस्या बुझ्न उनलाई कठिन भएन । उनले भने- "अब तिमीले नेपाली गीत तिमीलाई मनपर्ने शैलीमा गाउनु पर्छ, जसले जेसुकै भनून् !"
यो उनका लागि येशू वचनझैँ भयो । त्यसपछि उनले आफूभन्दा कम उमेरका राम्रा वाद्यवादक भाइहरु खोजिन् र ब्याण्ड बनाइन्- अभया एण्ड स्टिम इन्जन्स् । पहिलो एल्बम यही नामबाट निकालिन् सन् २००५ मा । उनलाई काठमाडौँ शहरले धेरै थोक दिएको छ, रेडियोकर्मीको पहिचान, गायिकाको परिचय, वैवाहिक जीवन र छोरोको सामिप्यता अनि गायकीको समीक्षा पनि ! एल्बम निस्किएपछि एक चर्चित सङ्गीतकारले त उनकै मुखेञ्जी सोधे- "तिमी किन त्यसरी चिच्याएकी ? गाउन बिर्सियौ कि के !" शुरुमा त उनलाई यो निकै झ्वाँक चलाउने प्रतिक्रिया थियो तर यो प्रतिक्रियालाई उनले 'च्यालेञ्ज'का रुपमा लिइन् र अहिले त्यो च्यालेञ्ज नयाँ गीति एल्बमको रुपमा बजारमा आउने भएको छ ।
"मेरो अहिलेसम्मको साङ्गीतिक अनुभव नै दोस्रो एल्बम हो", लामो सास फर्ेर्दै उनले भनिन्- "प्रविधिका कारण हाम्रा एल्बम बिक्री हुन छाडेका छन्, प्रविधिलाई फेल गर्न हामीले अघिल्लाभन्दा पछिल्ला सिर्जना राम्रोभन्दा धेरै राम्रो बनाउन ज्यादै जरुरी छ । मेरो नयाँ एल्बम त्यही भावनाको प्रतिविम्व हुनेछ ।"
हुन पनि उनले चार शहरको अनुभव यसमा घोलेकी छिन् भन्ने दाबी गरेकी छिन्, के साँच्चै उनको एल्बम उनले भनेजस्तै होला त !